Fuaad Aadan Cadde: Han-fogaan
..Kal-furnaan- Qormada 1aad Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale – See more at: http://hadhwanaag.ca/detail.aspx?id=160213#sthash.6ByhWXl3.dpuf | Biyoguurenews.com
Home Wararka Fuaad Aadan Cadde: Han-fogaan
..Kal-furnaan- Qormada 1aad Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale – See...
..Kal-furnaan- Qormada 1aad Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale – See more at: http://hadhwanaag.ca/detail.aspx?id=160213#sthash.6ByhWXl3.dpuf
rgb(0, 0, 0); text-align: justify;”> Markaad guurtay bay leeyihiin, Ina Galaaloowe,
Waa qormo aad u kooban. Waa mid aan ku qasbanahay oo aan marnaba I dhaafi karin, Ilaahay oo si kale qaddara ha joogto e’. Waa gole-ka-fuul oo waqti badan oo aan isku diyaariyo uma aan helin. Geerida naxdinta leh ee Fu’aad Aadan Caddena wax laga aammuso ma aha. Kolley nin rag ahi ka aammusi maayo, qof kale se mooyaan.
15kii bishii saddexaad ee Marj, 2014kii, aniga oo ka hadlayay ama qormooyin aad u koobnaa ka qorayay geeridii naxdinta lahayd ee Maxamed Saleebaan Tubeec, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’, waxaan idiin dareeriyay:
“Geeriyaha qaarkood isu ekaa…….Xilligu isu ekaa…….Sida la isu gaasirayaa isu ekaa……Sida foolaadka mujtamaca loo illoobayaa isu ekaa…….Maansada tuduca aynu qormadan ku ballaysinnay ka soo qaadannay, waxa tiriyay Cali sugulle Dun-carbeed. Wuxu ka dul tiriyay xabaashii Maansayahankii, Xiddigiyihii, Murti-dhaadhigii, Far-horseedihii, Taariikhyahankii, Dhaqan-dhaadkii, Hidde-dhowrkii, Macallinkii Muuse Galaal, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’.
Xigashadaa kooban aan ballaysin ka dhiganno. Wax kale ugama gol lahayn e’, geeriyaha ayaa isu ekaa. Geesiyaal galbaday oo ku geeriyooday geyi shisheeye. Meydkoodii oo diyaarado lagu keenay, aas-ku-sheeg qaran oo loo smaeeyay iyo Guddiyaal aasaskaa loo magacaabay. Hadda waa geesiyaal qaran oo aan noloshoodii dheerayd waxba la gashan, bal se la gaasiray. Waxba yaan gocoshada naftan gaatin-socodka guhaadinnine aan uga gudbo geesiga hoyday oo wax aan sidaa u badnayn oo xus iyo xusuusba ah ka soo garoocdo sooyaalkiisii nololeed inta aan ka gaadhi karo.
Maqalka ka-sokow, Fu’aad Aadan Cadde barashadiisa waxa iigu horreysay 1993kii. Waa maalmihii aynu ku jirnay Shirweynihii Guurtida ee Boorame. Ergooyinka Shirweynaha fadhiyay 151 ayay ahaayeen. Siddeed ayaa ahaa Shir-guddoonka oo aan cod lahayn. Waa maalmihii ay Guurtidu, Guurtida ahayd. Ergooyinka rasmiga ah ka sokow, waxay magaaldu la ciir-ciiraysay dadkii kale ee dul-joogta ahaa. Da’ walba waa ay lahaayeen. Gobollada oo dhan waa la iskaga yimid. Xubno qurbaha ka yimid ayaa iyaguna joogay.
Dadka muddakarka ah ee fagaarahaa ka muuqday ee magaalada joogay waxa ka mid ahaa Fu’aad Aadan Cadde oo ka tirsanaa mudanka odayaashii ka socday gobolka Sool. Shirweynahaas Guurtidu in kasta oo uu si rasmiya uga socday Dugsiga Sare ee Sheekh Cali Jowhar, haddana xaqiiqadu waxay tahay in ay shirarku inta badan ka socdeen magaalada gudaheeda. Waxa la adeegsanayay maah-maahda Soomaaliyeed ee tidhaahda: “Talo goonyaha ayay ka go’daa.”
Madasha Shirweynuhu ka socday ka-sokow waxa jiray dhowr fagaare oo kale oo saamayntooda ku lahaa Shirweynahaas. Iyada oo guud ahaanba la fadhiisan jiray meelo badan oo magaalada Boorame ka mid ah oo Ajendayaashii Shirweynahaas lagu falanqayn jiray, haddana saddexda goobood ee ugu mudnaa waxay ahayeen guryihii ama saldhigyadii ay kala degganaayeen: Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ahaa Madaxweynihii Jamhuuriyadda Somaliland, Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo Cumar Carte Qaalib oo ahaa murashixiin u trtamayay jagada Madaxweynennimo.
Previous articleKhudbadii Wasirkii Hore Maalyadu Cabdicasiis Samaale U Jeediyay Dadweynaha Gabiley
Next articleMadaxweynihii Hore ee Puntland Oo Hargeysa Ka Soo Degaya